I-Buche de Noel (i-Yule Log Cake) iresiphi + yeTutorial- iSugar Geek Show - Indlela Yokupheka
I-Buche de Noel Cake (i-Yule Log Cake) yidizethi yeKrisimesi yeklasikhi
Ikhekhe le-Buche de Noel (okanye i-yule log ikeyiki) yenziwa ngesiqhelo ngekhekhe elimthubi kwaye ligcwaliswe ngebhotoloyitha yetshokholethi. Ingaphandle ihlala iqabukile ngetshokholethi ganache kwaye inikwe ubume obufana nexolo. Ihlala ithuliwe iswekile eyimpuphu ukufana nekhephu kwaye ngamanye amaxesha inenye imihombiso eyenziwe ngemarzipan okanye amakhowa emeringue.
Ukwenza iBuche de Noel, kuya kufuneka wenze:
Ikhekhe le-Vanilla roll roll
Ukuzalisa ibhotoloyane yetshokholethi
Ukutshiza kweTshokholethi ethambileyo
Amakhowa eMeringue (ukhetho)
Funda ukuze ufunde kabanzi malunga nekhekhe le-Yule log, iresiphi efanelekileyo kunye nemiyalelo yenyathelo ngenyathelo malunga nendlela yokwenza eyakho indawo entle yeKrisimesi yeBûche de Noël. Isifundo esipheleleyo sevidiyo kwikhadi leresiphi emazantsi eposti yebhlog.
Imbali yeBuche de Noel (ngokokwazi kwethu)
UKUYA yule log (hayi ikeyiki) sisigodo esitshiswa kwindawo yakho yomlilo ngexesha lomnyhadala wasebusika. Ekuqaleni yayiyisiko laseNordic. I-Yule ligama leminyhadala yaseWinter Solstice eScandinavia nakwezinye iindawo ezisemantla eYurophu, ezinje ngeJamani. Isigodo (ngamanye amaxesha wonke umthi) sasiza kukhethwa ngononophelo size singeniswe endlwini sikhanyiselwe kwelinye icala, yonke eminye inabele endlwini. Inxalenye encinci yelog iya kutshiswa yonke imihla, yongeza kwiintsuku ezili-12 zeKrisimesi.
Iiresiphi zokupheka zekhekhe ezineesoda
Oku kuvakala kakhulu kum njengokuzisa umthi weKrisimesi endlwini. Ndiyavuya ngokubeka nje izibane emthini wethu ngoku kwaye singazikhanyisi ngomlilo. Ndizakunamathela ekubhakeni ilog yam.
Kuxhomekeke kwingingqi, izithako ezahlukeneyo (ezinje ngetyuwa okanye i-whine) zazitshizwa ngaphezulu kwelog ngaphambi kokutshiswa ukuzisa ithamsanqa okanye ukuqinisekisa isivuno esihle sonyaka olandelayo. Uthuthu oluvela kwilog leyo apho lwalusetyenziswa khona ngamayeza kunye nethamsanqa elifanelekileyo.
Kodwa oku kunxulumene nantoni nekhekhe yelog? Ewe, kancinci kancinci, ukubhiyozela ukutshisa umthi wonke kwigumbi lakho lokuhlala kwaphela. Mhlawumbi imililo emininzi endlwini? Ekugqibeleni, abantu babeka nje ilog enye kwindawo yabo yomlilo ukumela ilog leyo.
Ngamanye amaxesha kwakungekho ndawo yokubasa umlilo konke kwaye ilog ibekwa etafileni njengendawo ephambili. Iyavakala into yokuba ekugqibeleni umntu othile athathe isigqibo sokuba ilog yekhekhe ingangcono kunelog yokwenyani. Ngokucacileyo le ndlela yokutya ikhuphe kwaye yaba yidessert ethandwa kakhulu kwihlabathi liphela.
E-France, i-buche de Noel yenziwa ngekeyiki yesiponji engenampuphu, igcwele itshokholethi etyutywe cream emva koko yaqengqeleka yomilo welog. Yathathwa ngothuli lweswekile ukufana nekhephu kwilog. Sihlala sibhekisa kwi-bûche de Noël njengekhekhe ye-Yule log eMelika.
Loluphi usuku onokuthi uqale ngalo ukubhaka iBuche de Noel yakho?
Makhe sithethe ngenkqubo yokwenza le khekhe. Cwangcisa ukwenza ezinye izinto kusuku olungaphambi kokuhombisa ukwenza ubomi bakho bube lula.
Yenza i-ganache kwaye mayiyihlale kubushushu begumbi
Yenza umqulu wekhekhe wokuqengqeleka, ugcwalise nge-buttercream kwaye ubande ubusuku bonke
Yenza amakhowa e-meringue
yenza itshokholethi ethambileyo iqabaka iqabaka
Qengqa ikeyiki yesiponji kwaye ubande
Hlanganisa ikhekhe lakho leBuche de Noel uze uphole okungenani iyure enye ngaphambi kokukhonza.
Uthuli oluneswekile eyimpuphu kanye phambi kokukhonza.
Indlela yokwenza isiponji
Ukwenza isiponji sokwenza ikhekhe akunzima kakhulu kodwa kukho izinto oza kufuna ukuzigcina engqondweni ukuze uphumelele.
Hlanganisa ndawonye amaqanda kunye noshukela phezu kwembiza yamanzi
Amaqanda abetha kwinqanaba lesibhondi
Songa kwizithako ezomileyo ezahluzwe zangamacandelo amathathu
Ukusasaza kwiphepha lephepha elihlanganiswe nephepha lesikhumba yonke indlela eya emaphethelweni
Bhaka imizuzu eyi-8 de usete
yikhulule ikeyiki emaphethelweni epanini ngemela
Flip ikhekhe kwindawo yokupholisa kwaye ukhuphe iphepha lesikhumba. Beka itawuli yeti ngaphezulu kwekhekhe
Flip ikhekhe kwakhona. Uthuli kunye noshukela olungumgubo
Qengqa isiponji ngokuqinileyo ngaphakathi kwitawuli yeti kwaye uphole
Qinisekisa ukuba utsiba umxube weqanda / weswekile kwinqanaba lebhoni. Isigaba sebhebhoni xa i-batter iphindwe kathathu ngobukhulu kwaye ihleli phezu kwayo xa uyigalela kwiiribhoni kwi-whisk.
Phakamisa umgubo kumxube weqanda. Songa umgubo wakho ngobunono okanye usengozini yokuphulukana nawo wonke umoya kwikhekhe lakho lesiponji.
Ukusasaza i-batter yonke indlela ukuya kumda wepen yakho enephepha lesikhumba. Akukho sidingo sokugcoba ipani.
Sukuyigqiba ikhekhe lakho okanye imiphetho yakho iya koma kwaye uqhekeke xa uzama ukuyisonga.
Qengqa ubude bekeyiki yakho ukuze ibe nde ukuze ubenokwanela ukusika isiphelo kwaye ayizukuba mfutshane kakhulu.
Qengqa ikhekhe lakho kanye ehovini ngetawuli yeti. Xa ikeyiki ifudumele inceda ikeyiki ukuyigcina imilo engqukuva njengoko iphola, ukunciphisa amathuba okuqhekeka kamva.
Vumela ikhekhe lakho libandeze ubusuku bonke ngaphambi kokucheba izilayi ezihle.
Uyidibanisa njani iBuche de Noel
Emva kokuba ikhekhe lakho lesiponji lipholile kangangeyure. Ungayityhila ngocoselelo kwaye ugcwalise ngaphakathi ngomaleko webhotile yetshokholethi, itshokholethi ganache.
Ikeyiki yesiponji ayisiyonto imanzi, ke ukuba uyayifuna, gxobhoza umphezulu ngesiraphu elula kuqala kwaye usebenzise ukuzaliswa okufana noko itshokolethi yobusi mousse okanye ucwambu eqhuqhiwe . Yongeza i-cocoa powder kwi-cream ehlanjulweyo ukwenza i tshokoleta. Emva koko qengqa ikhekhe ubuyisele umhle kwaye uqinile ukuze kungabikho zikhewu ekugcwaliseni.
Qengqa ubude besiponji
Beka ikhekhe kwifriji kangangeyure okanye kwifriji ngobusuku obuzolileyo.
Sika iziphelo zekhekhe ukuze ubonakalise ukujikeleza kokugcwalisa. Emva koko unqumle elinye iqhekeza lekhekhe eliqengqelekileyo kwindawo encinci kwaye ubeke kwicala lomqolo ukumela isebe.
indlela yokwenza ikeyiki ibukeke njengomthi
Iqabaka ingaphandle kweBuche de Noel kunye netshokholethi ganache. Hombisa ngaphandle ngamanye amakhowa akho e-meringue, i-cranberries entsha kunye ne-sprigs ye-rosemary. Vuthulula yonke into kancinci ngeswekile eyimpuphu ukuze ijongeke njengekhephu.
Phola ngaphambi kokuba usebenze. Ikhekhe leBuche de Noel lihlala iintsuku ezintathu kwifriji.
Iiresiphi ezininzi zekrisimesi zokuthanda
Iresiphi yendlu yesonka sejinja
Iresiphi yecookie yesonka sejinja
Iresiphi yekhekhe yokuhamba
Ikhekhe leBuche de Noel yikhekhe elula kunye ne-airy egcwele i-chocolate buttercream kunye ne-frosted ne-ganache ukuze ifane ne-log. Ixesha lokulungiselela:10 imiz Ixesha lokupheka:8 imiz 1 hr Iikhalori:388kcal
Uyenza njani ikhekhe leBuche de Noel (Yule Log) ukusuka Iswekile yeGeek Show ivuliwe Vimeo .
▢3 inkulu (100 g) abamhlophe beqanda malunga nee-ounces ezi-3
▢1/4 icephe ikrimu emuncu
▢5 iiununci (142 g) iswekile eninzi
▢1/2 icephe isicatshulwa sevanilla
▢1 cinezela ityuwa
▢1/2 icephe cocoa umgubo
▢8 inkulu (454 g) amaqanda
▢8 iiununci (227 g) iswekile
▢8 iiununci (227 g) umgubo wekhekhe okanye wonke umgubo wokutya
▢1/2 icephe ityuwa
▢Mbini icephe isicatshulwa sevanilla
▢4 iiununci abamhlophe beqanda abamhlophe
▢8 iiununci ushukela ocoliweyo
▢8 iiununci ibhotolo engenatyiwa
▢1 icephe isicatshulwa sevanilla
▢1/4 icephe ityuwa
▢1 ounce cocoa umgubo
▢16 iiununci (454 g) itshokholethi semi-eswiti umgangatho olungileyo
▢14 iiununci (397 g) ukhilimu onzima
▢yima umxubeki ngesitya sesinyithi kunye nesincamathiseli se whisk
▢Iphepha lephepha le-1/2 (13'x18 ')
▢ipani yesosi ephakathi
▢# 2A Ingcebiso yombhobho
Phisa ubushushu be-oveni ukuya ku-225ºF uze ulayishe iphepha lokubhaka ngephepha lesikhumba
Yizisa ii-intshi ezimbini zamanzi ukuze udibanise ebhodweni. Beka isitya sokucoceka sentsimbi esicocekileyo ngaphezulu kwamanzi. Akufanele ichukumise amanzi. Hlanganisa abamhlophe beqanda kunye noshukela kunye ne-whisk ukudibanisa. Ngamaxesha athile phehla njengokuba kushushubeza ukusasaza ubushushu kunye nokunyibilikisa iswekile.
Nje ukuba iqanda lakho elimhlophe libe kwi-110ºF (okanye xa ungaziva naziphi iinkozo zeswekile phakathi kweminwe yakho) ufundelwa ukubetha Beka isitya kumxube wakho wokuma kunye ne-whisk attachment. Whisk kwi-med ngomzuzu omnye, yongeza kwi-tartar, ityuwa kunye nencasa.
Bump phezulu kwaye vumela isabhokhwe de ufike kwi-STIFF iincopho.
Beka incam yombhobho kwingxowa yakho yokubhobhoza kwaye ususe incam yebhegi. Pipe iziqu zakho kunye neekepusi (jonga ividiyo) Bhaka imizuzu engama-60, emva koko ucime i-oveni kodwa ungazikhuphi ii-cookies. Bayeke bahlale eontini bade babande kakhulu. Ndishiya eyam ngobusuku obunye.
Phosa umngxunya kwisiseko se-mushroom kwaye ungeze isuntswana le-ganache okanye itshokholethi enyibilikiweyo emngxunyeni. beka isiciko esiqwini.
Hlanganisa i-cocoa powder kunye ne-vanilla. Sasaza iincopho zamakhowa ngebrashi eqinileyo yepeyinti.
Kwisipuphu esiphakathi, ukufudumeza ukhilimu kude kube kukumila. Musa ukubilisa. Thela ngaphezulu itshokholethi kwaye uhlale imizuzu emi-5.
Yongeza kwi-vanilla kunye netyuwa kunye ne-whisk kude kube lula. Thela kwi-pan engekho nzulu kwaye ugubungele ngesongelo seplastiki ukupholisa kubushushu begumbi ubusuku bonke.
Ukucwilisa i-oveni yakho ukuya ku-400ºF kunye ne-oveni yokubhaka embindini. Umgca we-1/2 'yepani yephepha (13 `` x18') kunye nephepha lesikhumba.
Gcwalisa ipani yakho ngamanzi ama-2-3 kwaye uzise kwimathumba ngobushushu obuphakathi kude ubilise uze unciphise ubushushu uye phakathi okanye ade amanzi abile.
Beka amaqanda, iswekile kunye netyuwa kwisitya sokuxuba kunye nokudibanisa kunye ne-whisk
Beka isitya ngomxube ngaphezulu kwamanzi akho abilayo. Usebenzisa i-whisk yakho, gxuma umxube weqanda kancinci de i-granules yeswekile inyibilike (malunga ne-110ºF) Susa emlilweni.
Namathisela isitya sakho kumxube wakho wokuma kunye ne-whisk attachment. Yongeza kwi-vanilla yakho kunye ne-whisk ephezulu kwimizuzu engama-2-3 uze ufike kwinqanaba lebhebhoni (jonga amanqaku). Umxube kufuneka ube kathathu ngevolumu kwaye ukhanyise ngombala.
Phakamisa kwi-1/3 yomxube wakho womgubo uze usonge (jonga amanqaku) umgubo ngobunono ngaphandle kokonakalisa ubume bomxube weqanda lakho. Phinda kabini amanye amaxesha ngomgubo ude udityaniswe.
Ukusabalalisa i-batter ngokulinganayo kwiphepha lakho elilungiselelwe kwaye usasaze nge-spatula ye-offset okanye ummese yonke indlela eya kwimida yepen. Sukuyigcoba ipani yakho.
Bhaka imizuzu esi-8 emva koko ususe ehovini ubeke kwindawo yokupholisa
Kwangoko sebenzisa imela yokubamba ukusika ngononophelo umphetho wesiponji kude kumacala epani. Uthuli umphezulu kunye neswekile olungumgubo. Beka esinye isiqwenga sesikhumba ngaphezulu kwekhekhe, emva koko ubambe enye indawo yokupholisa kunye neflip ngaphezulu ukukhupha ikeyiki epanini.
Susa iphepha lesikhumba ngononophelo kwaye uthule umphezulu ngeswekile engaphezulu.
Beka itawuli yeti ngaphezulu kwekhekhe kwaye uyiqengqele ngononophelo (LENGTHWISE). Beka efrijini ukuze upholise iyure enye ngaphambi kokugcwalisa iqabaka.
Phakamisa ndawonye iswekile kunye nomgubo wecocoa ukususa naziphi na iziqhu.
Beka abamhlophe beqanda, iswekile engumgubo kunye nomgubo wecocoa kwisitya sokuxuba esime.
Namathisela i-whisk kwaye udibanise izithako ezantsi uze ubethe phezulu kwimizuzu emi-5.
Yongeza ibhotela yakho kwiinqununu. Yongeza kwi-vanilla kunye netyuwa. Hlanganisa phezulu kude kube lula ukukhanya kunye nokukhanya.
Susa i-whisk kwaye ubeke isinamathiselo se-paddle kumxube. Vumela ibhotolo yakho yokuxuba isezantsi kude kube ngumxube ugudile kwaye ucocekile kwaye akukho mabhabhu aseleyo. Oku kungathatha ukuya kwimizuzu engama-20 (ukhetho)
Iindibano zeCake Roll
Ngenisa ngononophelo isiponji sakho esipholileyo. Inokuqhekeka kancinci ukuya embindini wokujikeleza kwaye kuyinto eqhelekileyo.
Sasaza uluhlu lwe-buttercream yakho phezu komhlaba
Qaphela ngokukhawuleza ikhekhe yakho. Sika iziphelo zekhekhe ukuze zibukeke zicocekile kwaye emva koko zidlulisele kwisitya.
Sika malunga no-4 'ukuphela kwelinye icala kwi-engile engama-45 kwaye ubeke ecaleni kwesiqwengana eside somqulu ukuze ubonakale njengesebe
Frost ngaphandle kunye ne-ganache yakho epholileyo
Hombisa ngamakhowa akho e-meringue, i-cranberries kunye neerosemary sprigs
Uthuli kancinci ngeswekile eyimpuphu kanye phambi kokukhonza
Ncedisa ngokubandayo. Kuya kuhlala iintsuku ezintathu kugqunywe kwifriji.
Inqanaba lentambo kuxa umxube weqanda lakho liphindaphindwe kathathu ngevolumu, ikhanya ngombala kwaye xa yonakaliswe kuyo, yenza iirebhoni zebetter ezihlala phezu komhlaba ngaphambi kokunyibilika kancinci kuye. Gcwalisa ibhetter Ngokusebenzisa i-spatula ejikeleze umda wangaphandle webhetri kunye nesitya kwaye emva koko uphakamise ngobunono umbethi kuye. Oku kuvumela umbethi ukuba adibanise ngaphandle kokonakalisa ubuthathaka.
Ukukhonza:1ukukhonza|Iikhalori:388kcal(19%)|IiCarbohydrate:44g(Shumi elinantlanu%)|Iprotheni:7g(14%)|Amafutha:Amashumi amabinig(31%)|Amafutha agcweleyo:Shumi elinanyeg(55%)|Icholesterol:125mg(42%)|Isodium:188mg(8%)|Potassium:223mg(6%)|Ifayibha:Mbinig(8%)|Iswekile:30g(33%)|Vitamin A:473IU(9%)|Vitamin C:1mg(1%)|Ikhalsiyam:46mg(5%)|Intsimbi:Mbinimg(Shumi elinanye%)
nba 3pt irekhodi kumdlalo
Abadlali abalishumi abaphezulu bebhasikithi ngalo lonke ixesha
vuka ngoku obu bomi baseMelika